Home / ကိုယ်ကိုယ်ကို ဒီမေးခွန်းတွေ မေးကြည့်ဖူုးလား
“Life is an endless process of self-discovery.” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ဘဝဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာဖွေရင်း အကောင်းဆုံး Version တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ပြုပြင် ကြိုးစားယူရခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိပေမယ့် Personal Development တိုင်းက Self Discovery ကနေ စတင်ကြတာချည်းပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာ ကျွန်တော်တို့အများစုက ကိုယ့်အိပ်မက်တွေကို ရှာဖွေနေရင်းနဲ့ကို လမ်းပျောက်သွားတတ်တယ်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်၊ ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ်တွေ ပျောက်ဆုံးတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါ ပျောက်ဆုံးသွားလေ့ရှိကြတယ်။ အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင် ကိုယ်တိုင် ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိ လမ်းပျောက်သွားတတ်ကြတယ်ပေါ့။
အကယ်၍ သင်လည်း လမ်းပျောက်ဖူးခဲ့သူ၊ လမ်းပျောက်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ သိချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင် အဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါဦး။
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Lost ဖြစ်သွားပြီဆိုပါစို့။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြန်လည် ရှာဖွေကြမှာလဲ?
ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ဖို့ရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်တွေမေးရင်း သုံးသပ်တတ်ဖို့ပါပဲ။
Quality Question တွေက Quality Life တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကိုယ့်အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်လေ ဘဝက တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ ရှေ့ဆုံးရောက်လေ ဖြစ်လာမှာပါ။
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် Quality Question ဆိုတာ ဘယ်လို မေးခွန်းမျိုးတွေ ဖြစ်မလဲ? ဖတ်ကြည့်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
လွယ်မလိုလိုနဲ့ ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းကိုပြောပါဆို ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ငယ်ငယ်က သားလေး/သမီလေး ကြီးလာရင်ဘာလုပ်ချင်လဲလို့ မေးကြတဲ့အခါ ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ် အင်ဂျင်နီယာကြီးလုပ်မယ်လို့ ဖြေခဲ့ကြပေမယ့် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ တကယ်တမ်းကိုယ်ဖြစ်ချင်တာဘာလဲဆိုတာ စပြီးဝေဝါးလာတော့ပါပဲ။ အိပ်မက်နဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာ ကွာခြားမှုတွေ ကြီးမားလာတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့၊ ဖြစ်လာတာတွေ ကွဲလွဲလာကြတယ်။ အများစုအတွက် ဒါကသဘာဝပါပဲ။ ဘီလ်ဂိတ်စကားကို နမူနာယူပြီးပြောရရင် ကလေးဘဝတုန်းကတော့ ကလေးအတွေးနဲ့ပြောတာ မင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး၊ လူကြီးဖြစ်နေပြီးမှ လူကြီးအတွေးမဟုတ်ရင်တော့ မင်းအပြစ်ဖြစ်သွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘဝမှာ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာ တိတိကျကျသိသင့်ပါတယ်။ အောင်မြင်ချင်တာလား၊ ချမ်းသာချင်တာလား၊ ပညာတွေ ပြည့်ဝစွာ တတ်နေချင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ နေသွားချင်တာလား။ အများကြီးပါပဲ။ ဘယ်လိုနေထိုင် ရှင်သန်ချင်တာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် အဖြေရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ခု လက်ရှိနေရာ ဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲ? ဒီနေရာမှာရော ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ?
ကျွန်တော်တို့တွေ Grab taxi စီးသလိုပေါ့။ တစ်နေရာရာကိုသွားဖို့ ကိုယ်လက်ရှိ ရှိနေတဲ့နေရာကိုလည်း ပြောဖို့လိုအပ်တယ်လေ။ ဒီလိုသဘောတရားမျိုးပဲ … ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို သွားဖို့ဆို လက်ရှိရောက်နေတဲ့ နေရာကို အရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ ခုလက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ နေရာကို တချက်လောက် ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒါက ကိုယ်အိပ်မက် မက်ထားတဲ့ နေရာလား? ကိုယ့် ပန်းတိုင်တွေထဲက နေရာတစ်ခုလား? အကယ်၍များ နောက်ခြောက်လ၊ တစ်နှစ်၊ သုံးနှစ် ကြာလာတဲ့အခါမှာရော ဒီ လက်ရှိနေရာမှာပဲ လက်ရှိအတိုင်း ဆက်ရှိ၊ လုပ်နေရဦးမယ်ဆိုရင်ရော ကျေနပ်မိနေမှာလား? မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ အဖြေက ရှင်းနေပါပြီ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုပြောင်းလဲဖို့ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို ရောက်ဖို့အတွက် ဘယ်က ဘယ်လို စပြင်ဆင်ရမလဲ ဆိုတာကို အဖြေထုတ်နေသင့်ပါပြီ။
Future Self ကကျေးဇူးတင်နေရမယ့် အရာမျိုးကို လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလား?
Facebook မှာ ဟိုးအရင်နှစ်တွေတုန်းက တင်ထားခဲ့တဲ့ Years ago memo တွေပြန်တက်လာတိုင်း ငါဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့များ ပေါက်ကရတွေ ရေးခဲ့ တင်ခဲ့တာပါလိမ့်လို့ အတွေးပေါ်ဖူးကြတယ်မလား။ Facebook မှာဖြစ်တာက အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ့်ပြင်ပဘဝမှာလည်း အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေပါပြီ။
တကယ်တမ်းဖြစ်သင့်တာက ကိုယ့်ရဲ့ Future Self ကကျေးဇူးတင်ရမယ့် အရာမျိုးတွေကို လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်ချိန် တစ်နေရာရာရောက်တဲ့အခါ “ငါ အဲ့အချိန်တုန်းက ဒီလိုတွေ လေ့လာခဲ့လို့ ကြိုးစားခဲ့လို့ ဒီလို result ကောင်းတွေရတာပါလား” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ ကျေးဇူးတင်နေစေဖို့ ခုလက်ရှိ ကိုယ်ဘာတွေလုပ်နေပြီလဲ? ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ မေးကြည့်ပါ။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဘာဖြစ်ချင်မှန်းသိရင် ဘာတွေလုပ်ထားရမယ် ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတာမျိုးက မခက်ခဲပါဘူး။ တကယ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတာပါ။
အပြောင်းအလဲတွေအပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်က ဘယ်လိုလဲ?
“The only thing that doesn’t change is the fact that everything is changing.” ဆိုသလိုပေါ့၊
ဒီလို အပြောင်းအလဲ အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ကိုယ်က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်တတ်တဲ့သူလဲ။ ပြောင်းလဲ ရမှာကို ကြောက်နေတတ်တဲ့သူလား၊ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်အောင် နေတတ်သူလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အပြောင်းအလဲမျိုးကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိရပါမယ်။ သင့်မှာ ဒီလိုအရည်အချင်းမျိုးရှိပြီလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပါ။
တစ်လ လစာဘယ်လောက်ရတာ၊ တစ်နှစ် ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတာ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုး မဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူကစလို့ အလုပ်အကိုင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစတာတွေက ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ?
ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကဘာလဲ? ကိုယ့်စံနှုန်းက ဘာများလဲ? ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ Represent လုပ်ချင်တာလဲ? ဒီလို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံတွေနဲ့ ကိုယ်နေထိုင်နေတဲ့ပုံစံက ကိုက်ညီမှုရှိရဲ့လား စဉ်းစားကြည့်ပါ။ နောက်ပြီး ... ကိုယ်ဟာ အရေးပါတယ်၊ ကိုယ်ပိုင် တန်ဖိုးရှိတယ် ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ ရှေ့ဆက် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ရာ ကြိုးစားပါ။
ကိုယ်က ဘာတွေလုပ်ဖို့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေ ကြောက်နေတတ်တာလဲ?
ဘဝမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်ရောက်ချင်ရာကို မဖြစ်နိုင် မသွားနိုင်ရတဲ့ အကြောင်းတရာတွေထဲမှာ Fear လို့ခေါ်တဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုက ထိပ်ဆုံးမှာပါပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုကို ကြောက်တယ်၊ အမှားလုပ်မိမှာ ကြောက်တယ်၊ အသိအမှတ်ပြုမခံရမှာ ကြောက်တယ်၊ ကျရှုံးမှာကို ကြောက်တယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒီလို ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေတာတွေ များလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ လမ်းပျောက်သွားတတ်ကြတာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာဖွေဖို့ဆိုတာ ကိုယ်ဘယ်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဆိုတော့ ဘယ်လို ကြောက်ရွံ့မှုမျိုးက ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းမှာ ပိတ်ဆို့ထားသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖွေပါ။ ကိုယ်တိုင် တွန်းလှန်ပါ။ ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
ဆိုတော့ ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် သင့်မှာ အဖြေ အသင့်ရှိပြီးသားလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ မရှိသေးတာလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်မိသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေကနေတဆင့် အတွေးစ တစ်ခုခုရသွားမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သ့င်ကိုယ်ကိုယ်သင် ပြန်ရှာတွေ့ဖို့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝသက်တမ်းမှာ သုံးပုံ နှစ်ပုံလောက်က မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ ဒါကြောင့် လမ်းမပျောက်အောင် ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာထက် လမ်းပျောက်ခဲ့ရင် ကိုယ်ကိုယ့်ကို ဘယ်လို ပြန်ရှာဖွေမလဲဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။